ဒီဇင်ဘာ | 2018 | မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်
Monthly Archives: ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြို့များတွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပ
​၂​၇ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာ သိရှိပြီး လေးစား လိုက်နာ ကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ သုံးခွနှင့် ခရမ်းမြို့နယ်များသို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်း သိကောင်းစရာ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲ များ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးညွန့်တင်နှင့် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအာကာဟိန်းစိုး တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သုံးခွမြို့နယ်၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ခန်းမတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်း စရာများ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း (၁၈၅) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တတ်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ လူ့အခွင့်အရေး အကြောင်းသိကောင်းစရာ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို ခရမ်းမြို့ နယ်ရှိ ဗြဟ္မစိုရ်ခန်းမတွင် ယင်းနေ့ မွန်းလွဲ ၁၃:၃၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ခရမ်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ များ၊ မြို့မိ/မြို့ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများ စုစုပေါင်း (၂၄၅) ဦး တတ်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားများတွင် ကော်မရှင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်က လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံအယူအဆများကိုလည်းကောင်း၊ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးညွန့်တင်မှ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအာကာဟိန်းစိုးက မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိလိုသည့် မေးခွန်း များကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည့် အနက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိကိုလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အဆင့်တွင် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များ ထားရှိရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိနှင့် ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း အပိုဒ် (၁၅)ပါ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပေးပါရန် အစရှိသည့် မေးမြန်းမှုများအပေါ် ကော်မရှင် ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်မြိုင်မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးဖြေကြား ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစား ရန်နှင့် မှန်ကန်စွာ သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲများကို ဆက်လက် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးသူများကွန်ရက်တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
​၂​၆ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပေးသူများ ကွန်ရက်တို့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာသိရှိပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ မှ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညို မြို့နယ် အတွင်းရှိ ထွဋ်မြတ်စံရာ စံပြကျေးရွာ၊ ကြို့ကုန်းစံပြ ကျေးရွာ၊ ရေသပြာ ကျေးရွာ နှင့် ထိန်တော တိုက်နယ်များသို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညိုမြို့နယ်၊ ထွဋ်မြတ်စံရာ စံပြကျေးရွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ထွဋ်မြတ်စံရာ စံပြ ကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ နှင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ စုစုပေါင်း (၅၉) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညို မြို့နယ်၊ ကြို့ကုန်းစံပြကျေးရွာ၊ ရွှေပြည်အေးလှိုင်မြရှင် ကျောင်းတိုက် တွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကြို့ကုန်းစံပြကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ နှင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ စုစုပေါင်း (၅၉) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူး တိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညိုမြို့နယ်၊ ရေသပြာကျေးရွာ ရွာလယ်ဓမ္မာရုံတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရေတပြာ ကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ နှင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ စုစုပေါင်း (၁၀၉) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မိုးညိုမြို့နယ်၊ ထိန်တောတိုက်နယ် ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်တွင် လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ထိန်တောတိုက်နယ်မှ ရွာသူရွာသားများနှင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ စုစုပေါင်း (၄၇) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဦးအာကာဟိန်းစိုးမှ လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံအယူအဆနှင့် အခြေခံအချက်များကို လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးသူများ ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် ကိုစောမောင်မောင်ခိုင်မှ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းသမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးသူများ ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် ကိုပိုင်ဆက် မှလည်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အပိုဒ်ပေါင်း (၃၀) အနက်မှ ရွာသူရွာသားများမှ ရွေးချယ်ပေးသော အပိုဒ်အချို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်းကို ဒေါ်ဖြိုးသီရိဗိုလ် တို့မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ရွာသူရွာသားများမှလည်း ယခုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါကြောင်း၊ လူ့အခွင့် အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကထက် ပိုမိုသိရှိလာကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ် ပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြ ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားရန် နှင့် မှန်ကန်စွာ သိရှိနားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲများကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးအာကာဟိန်းစိုးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ နှင့် ၂၀ ရက်နေ့များတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးညိုမြို့နယ်၊ ထွဋ်မြတ်စံရာ စံပြကျေးရွာ၊ ကြို့ကုန်းစံပြ ကျေးရွာ၊ ရေသပြာ ကျေးရွာ နှင့် ထိန်တောတိုက်နယ် များတွင် လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ အသိပညာပေး ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံ တင်ပြအပ် ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးပညာပေးသူများကွန်ရက်တို့မှ ပူးပေါင်းကျင်းပသည့် ရပ်ရွာလူထုအတွင်းလူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
​၂​၄ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပေးသူများ ကွန်ရက်တို့မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် ပြည်သူလူထုအတွင်း လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာများ ပိုမိုပြန့်ပွားစေရန်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကိုမှန်ကန်စွာသိရှိပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးလာနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်အတွင်း ရှိ ရှမ်းကန်ကျေးရွာ၊ သပြုကျေးရွာ၊ အုန်းနှဲကျေးရွာနှင့် အလယ်ရွာကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ လူ့အခွင့်အရေးအသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ ရှမ်းကန်ကျေးရွာ၊ သီရိမင်္ဂလာ ကျောင်းတိုက်တွင် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရှမ်းကန်ကျေးရွာမှ ရွာသူ ရွာသားများနှင့် နီးစပ်ရာကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ စုစုပေါင်း (၁၄၆) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ သပြုကျေးရွာ၊ သပြုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ သပြုကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများ စုစုပေါင်း (၉၈) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက် သပြုကျေးရွာမှ ကားဖြင့် အုန်းနှဲကျေးရွာသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး နေ့လယ် (၁၅:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် အုန်းနှဲကျေးရွာ မြတ်ပါရမီ ဆေးခန်းတွင် လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အုန်းနှဲကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများနှင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ စုစုပေါင်း (၇၆) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကဝမြို့နယ်၊ အလယ်ရွာကျေးရွာ စုပေါင်းဓမ္မာရုံတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အလယ်ရွာကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများနှင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများ တက်ရောက်ခဲ့ကြရာ စုစုပေါင်း (၁၀၃) ဦး စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်လွင်ထူးက လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံအယူအဆနှင့် အခြေခံအချက်များ ကိုလည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေးကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်သန်းသန်းဌေးမှ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်း သမိုင်းကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး အသိပညာပေး ကွန်ရက် အဖွဲ့ဝင် ဦးနောင်နောင်မှလည်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းပါ အပိုဒ်ပေါင်း (၃၀) အနက်မှ ရွာသူ ရွာသားများမှ ရွေးချယ်ပေးသော အပိုဒ်အချို့ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်မှတ် ရေးထိုးထားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာချုပ်များ အကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်းကို ဒေါ်ခိုင်မို့မို့နှင့် ဒေါ်သက်သက်ဝေ တို့မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ရွာသူရွာသားများမှ အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း မေးခွန်းများ မေးမြန်းကြရာ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်လွင်ထူးက ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ရွာသူရွာသားများက ယခုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရရှိပါကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ကထက် ပိုမိုသိရှိ လာကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မှန်ကန်စွာသိရှိနားလည်ပြီး လေးစားလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ ဆွေးနွေး ဟောပြောပွဲများကို ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍
​၁​၇ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
“ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် က ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မူလဝါကျ၌ မပါရှိသည်တို့ကို စကားရပ် အပိုဖြင့်ချဲ့၍ လည်းကောင်း၊ ချုံ့၍လည်းကောင်း၊ ဆွဲယူဖွင့်ဆို၍လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း မဖြစ် စေရန် ရှောင်ရှားခဲ့ပြီး စာပေသုံး စကားရပ်အသုံးအနှုန်း မျိုးဖြင့်သာ မူလဝါကျစာသား အနှစ်သာရ အသုံးအနှုန်းအတိုင်း အပိုအလိုမရှိစေရန် ဘက်စုံထောင့်စုံ စဉ်းစားညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ဆိုခဲ့”
၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံက ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (Universal Declaration of Human Rights) ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့်မြောက် ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ်ပေါင်း ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနားများ ကို ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဝန်း ကျင်းပခဲ့ကြရာ မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ သဝဏ်လွှာ ပေးပို့သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလည်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နယ်ပယ်စုံမှ အမှာစကားများ ပြောကြားကြခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွင် ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ကျောင်းသားလူငယ် များအတွင်း စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲနှင့် ပန်းချီပြိုင်ပွဲကျင်းပကာ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုပြသခြင်းတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးထားကြောင်းနှင့် နှစ် ၇၀ ပြည့်မြောက်သည့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းသည် လူသားအားလုံးနှင့်ဆိုင်သော လူ့အခွင့် အရေး “စံ” တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် အားလျော်စွာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံတို့က မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားအသီးသီးသို့ ပြန်ဆိုကြရာ ယခုအချိန်ဆိုလျှင် ဘာသာပြန်ဆို မှု ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာပြန် ဆိုမှု အမြင့်မားဆုံး စာရွက်စာတမ်း အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်းကို ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ပြန် ကြေညာပြီးသည့်နောက်ပိုင်း မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုမှု များ ရှိခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၌ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးနောက် ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် (၁၅) ဦး သည် ယခင်မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုများနှင့် ကုလသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသည့် သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်းများကို လေ့လာ၍လည်းကောင်း၊ အဘိဓာန်နှင့် ဝေါဟာရဗေဒကျမ်း (Thesaurus) များကို ကိုးကား၍လည်းကောင်း၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် မိမိတို့ ဖြတ်သန်းခဲ့သည့် ဥပဒေ၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ သံတမန်ရေးရာနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုမှု အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍လည်းကောင်း ကမ္ဘာ့ လူ့အခွင့် အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုပြီး မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက် မူကြမ်းကို မြန်မာစာပေနှင့် မြန်မာစာရေးထုံး ကျွမ်းကျင်သူ ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်က ဖတ်ရှု တည်းဖြတ်၍ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို အုပ်ရေပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ရိုက်နှိပ်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ တစ်ဖန် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းသည့် အဖွဲ့များ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာဘာသာမှ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအသီးသီးသို့ ပြန်ဆိုခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကား (၁၂) မျိုးအထိ ပြန်ဆိုဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေဖြင့် မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုရာ တွင် မူရင်းအဓိပ္ပာယ် မလွဲစေရန်နှင့် မြန်မာဘာသာဖြင့် ဖတ်ရှုရာ၌ ပြေပြစ်ချောမွေ့စေရန် အတွက် အချိန်ယူ၍ ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ကော်မရှင်သည် ကြေညာစာတမ်းအား လေ့လာ ညှိနှိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် စာသား၊ ဝါကျများ ဘာသာပြန်ဆိုမှုအချို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယူဆချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခါသမယတွင် ဤဆောင်းပါး ဖြင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ရှေးဦးစွာခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြရမည်ဆိုပါလျှင် “Universal” ကို ဘာသာပြန်ဆိုရာ၌ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်တွင် “ကမ္ဘာအနှံ့၊ ကမ္ဘာတစ်လွှား၊ ကမ္ဘာကုန်” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ “Universal” ကို “ကမ္ဘာ့” ဟု ပြန်ဆိုခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူများသာမက အစိုးရများ အကျုံးဝင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အဓိပ္ပာယ်လွဲချော်မှု မရှိသည့်အပြင် ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူပြီး စကားလုံးအားဖြင့်လည်း ကျစ်လျစ်မှုရှိမည် ဖြစ်သည်။ “Human Rights” ကို ပြန်ဆိုရာတွင် အချို့က “လူမှုအခွင့်အရေး” ဟုလည်းကောင်း၊ အချို့က “လူ့ရပိုင်ခွင့်” ဟု လည်းကောင်း ပြန်ဆိုကြသော်လည်း “Rights” ၏ သဘောသဘာဝမှာ “ရပိုင်ခွင့်” တွင်သာ ကန့်သတ်ထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ “ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်”၊ “တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်” သဘောများ လည်း ပါရှိခြင်းတို့ကြောင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သော “အခွင့်အရေး” ဟု ပြန်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် “Rights” ကို “အခွင့်အရေး” ဟု အစဉ်တစိုက် လက်ခံ သုံးနှုန်းခဲ့ကြသည်။
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နိဒါန်း၏ ဒုတိယအပိုဒ်တွင် “Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind” ကို “လူ့အခွင့်အရေးကို အလေးမထား မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းသည် လူသားတို့၏ အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုး ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကို ဖျက်ဆီးသည့် ရိုင်းစိုင်းရက်စက်သော အပြုအမူများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သော ကြောင့်လည်းကောင်း”ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ “barbarous” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “ရိုင်းစိုင်းသော၊ ရိုင်းပျသော၊ ကြမ်းတမ်းသော၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ “conscience” ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “(ကောင်းဆိုးကျိုးပြစ် ခွဲခြားသိမြင်တတ်သော) အသိစိတ်၊ အသိ တရား၊ စိတ်ဓာတ်၊ လိပ်ပြာ” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ယင်းအဘိဓာန်ဖွင့်ဆိုချက် များအပေါ် အခြေခံ၍ ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည့် စာစကားဖြင့် ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည် outraged the conscience of mankind ဟူသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် လွဲချော်မှု မရှိဘဲ အနှစ်သာရကို ပေါ်လွင်စေသည်။
ကြေညာစာတမ်းအပိုဒ် ၁၂ တွင် “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” ကို “မည်သူမျှ မိမိ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး လွတ်လပ်ခွင့်၊ မိသားစု၊ နေအိမ် သို့မဟုတ် စာပေးစာယူကိစ္စရပ်များတွင် မတရားဝင်ရောက် စွက်ဖက်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအား ပုတ်ခတ်ခြင်း ကိုလည်းကောင်း မခံရစေရ။ လူတိုင်းသည် ထိုသို့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပုတ်ခတ်ခြင်းတို့မှ ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ရပိုင်ခွင့် ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာ ပြန်ဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ “privacy” ကို Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Eighth Edition, 2010) တွင် “the state of being free from the attention of the public” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကော်မရှင်က မူလဝါကျပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်လွဲချော်မှု မရှိစေဘဲ “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်” ဟု အပိုအလို မရှိ ဘာသာပြန်ဆို ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် “reputation” ကို Collins Dictionary & Thesaurus (Fifth Edition, 2011) တွင် “notoriety or fame, esp. for some specified characteristic” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “notoriety” ကို “နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားခြင်း” ဟူ၍လည်းကောင်း၊ “fame” ကို “ဂုဏ်သတင်း၊ ကျော်ကြားမှု၊ ကျော်စောခြင်း” ဟူ၍လည်းကောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထား သည်။ ယင်းအဘိဓာန်များအပေါ် အခြေပြု၍ ဖတ်ရှုသူအတွက် နားလည်ရန် လွယ်ကူသည့် စာစကားဖြင့် မူရင်းဆိုလိုချက် အနှစ်သာရ ပေါ်လွင်စေရန် ကော်မရှင်က “ထင်ပေါ် ကျော်ကြားမှု” ဟု ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကြေညာစာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၁ (၂) တွင် “Everyone has the right to equal access to public service in his country.” ကို “လူတိုင်းတွင် မိမိနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းဖြစ်ရန် တူညီသည့် အခွင့်အရေးရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ “public” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “ပြည်သူ့” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ “service” ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီးဌာနက ထုတ်ဝေသော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်တွင် “တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ အစိုးရဌာန၊ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း” ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထား သည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၁ (၁) တွင် လူတိုင်းသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၌ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ဖော်ပြထားသည်။ အပိုဒ် ၂၁ (၃) တွင် အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသည် ပြည်သူပြည်သားတို့၏ ဆန္ဒအပေါ် အခြေခံရမည်ဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါ ဆန္ဒကို စစ်မှန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ဖော်ထုတ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထား​​​​​​​သောကြောင့်​​​ အပိုဒ် ၂၁ ၏ ပါဝင်မှုအကြောင်းအရာ (context) သည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းတွင် လူတိုင်းပါဝင်ခွင့်ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုမို၍ သေချာ စေသည့် ရည်ညွှန်းအထောက်အထားမှာ ဂျီနီဗာမြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights) မှ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသည့် Teaching Human Rights – Practical activities for primary and secondary schools စာအုပ်တွင် UDHR ၏ Plain language version ၌ အဆိုပါအပိုဒ် ၂၁ (၂) ကို… You also have the same right to join the public service as anyone else ဟု ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ကြေညာစာတမ်း၏ အပိုဒ် ၂၉ (၂) တွင် “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare inademocratic society.” ကို “မိမိ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး ရာတွင် လူတိုင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို အသိ အမှတ်ပြု၍ လေးစားရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် တရားမျှတ သော လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရား၊ အများပြည်သူအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးတို့ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း ဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသည့် ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်းသာ ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။” ဟု ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
အကြောင်းမှာ In the exercise of his rights and freedoms ဟူသောစကားရပ် သည် အပိုဒ် ၂၉ (၂) တွင် ပထမဦးဆုံးဖော်ပြထားသဖြင့် ယင်းနှင့် ဆီလျော်စေရန် “မိမိ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးရာတွင်” ဟု ကော်မရှင်က ပထမဦးဆုံး ဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ exercise ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို Dictionary များနှင့် Thesaurus များတွင် ကန့်သတ်ချက်ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်ကို မတွေ့ရှိရပါ။ ကျင့်သုံး (exercise) နှင့် ကန့်သတ် (restrict) တို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ အပိုဒ် ၂၉ (၂) ၏ ဆိုလိုရင်းမှာ လူတိုင်း (everyone) အနေဖြင့် ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်၊ ကျင့်သုံး ပိုင်ခွင့်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းခံစားခွင့်တို့ကို ကျင့်သုံးရာတွင် ဥပဒေအရ သတ်မှတ်ထား သည့် ကန့်သတ်ချက်များအတိုင်းသာ (only to such limitations as are determined by law) ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ဘာသာပြန်ဆိုရာတွင် မူလဝါကျ၌ မပါရှိသည်တို့ကို စကားရပ် အပိုဖြင့်ချဲ့၍ လည်းကောင်း၊ ချုံ့၍လည်းကောင်း၊ ဆွဲယူဖွင့်ဆို၍လည်းကောင်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း မဖြစ် စေရန် ရှောင်ရှားခဲ့ပြီး စာပေသုံး စကားရပ် အသုံးအနှုန်း မျိုးဖြင့်သာ မူလဝါကျစာသား အနှစ်သာရ အသုံးအနှုန်းအတိုင်း အပိုအလိုမရှိစေရန် ဘက်စုံထောင့်စုံ စဉ်းစားညှိနှိုင်းပြီး ပြန်ဆိုခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြလျက် ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့် အရေး ကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အခါသမယတွင် ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် စကားဝိုင်း
​၁​၄ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် ၇၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြုသီချင်းနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် မြန်မာ့အသံတို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
​၁​၁ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
အားလုံးအတွက်အခွင့်အရေး တေးရေး ဓီရာမိုရ် တေးဆို အောင်ထက်၊ Jewel
​၁​၀ ဒီဇင်ဘာ ​၂​၀​၁​၈
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြထံမှ ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ